के ५ दिनपछि ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिदैछन् ? आफैले गरे यस्तो घोषणा
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने:कपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हाल पार्टीभित्र जारी गतिरोध पाँच दिनभित्र अन्त्य हुने घोषणा गरेका छन्। एपी-वान टेलिभिजनबाट बुधबार राति प्रसारित ‘द ब्राभो डेल्टा शो’मा पत्रकार भूषण दाहाललाई दिएको अन्तरवार्तामा ओलीले यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
हाल खिचातानीकाबीच बढिरहेको पार्टीभित्रका सम्बन्धहरू हप्ता-दश दिनमा गाँसिनेछ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिदैं प्रम ओलीले यस्तो बताएका हुन्। ‘कति दिन भन्नुभयो तपाईंले ? हप्ता दश दिन होइन, हप्ता भन्दा यतै पाँच दिनमा फेरि मसँग प्रश्न गर्नुस्, के हुन्छ सिनेरियो। भोलिबाट एक भनेर का:उन्टडाउन सुरू गर्नुहोला’, अन्तरवार्तामा उनले भने।
उनको यो घोषणापछि के उनले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिने तयारी त् गरेका छैनन् ? भन्ने कौ:तुहलता समेत धेरैका मनमा उब्जिएको छ । अन्तरवार्तामा उनले पार्टी फु:टाउन लागेको देखि गुट चलाएको भन्ने चर्चालाई अस्वीकार गरेका छन्।
‘म मा:ओवादीलाई समेत एउटै धारमा ल्याउने मान्छेले गुट चलाएको देख्नुभयो ? गएको चु:नावमा एउटा गुट चलाएको देख्नुभयो कि मेचीकाली अभियान चलाएको देख्नुभयो ? मेचीकाली जनसागर उर्लेको देख्नुभयो ? देश ड्राइभ गर्न हिँडेको मान्छे सानो गुट चलाएको देख्नुभयो ? म संसदीय दलको नेता पनि नि:र्वाचन जि:तेर आएको हुँ। अध्यक्ष पनि लडेर भएको हुँ। म भन्दा अघि त ल:ड्ने चलन थिएन नि। लोकप्रिय मान्छे अगाडि बढ्न दिने चलन थिएन।’
यसैगरी उनले ता:त्कालिन मा:ओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग आधा-आधा कार्यकाल सरकारको ने:तृत्व लिने सहमति भएको भएपनि पछि पाँचै वर्ष सरकारको ने:तृत्व आफूले लिने सहमति भएको र त्यो सहमति दहाल स्व:यंको प्रस्तावमा भएको बताए।
‘हामीले बीचमा थप केही सम्झौता गर्‍यौं। सहमति थप गर्‍यौं, बनायौं। मेरो तर्फबाट कुनै डिमान्ड छैन। जो थप सहमति भए ती प्रचण्डजीले नै भन्नुभएकाले भएका सहमति हुन्। मेरो तर्फबाट प्रस्ताव गरिएको सहमति होइन। त्यो उहाँले (प्रचण्ड) पनि पटक– पटक भन्नुभएको छ। हामीले के भन्यौं भने पाँच वर्ष नै यो सरकार रहन जरुरी छ’, अन्तरवार्तामा उनको ज:वाफ थियो।
त्यसैगरी उनले पार्टीभित्र देखिएको समस्यासम्बन्धी प्रश्नमा ज:वाफ दिदैं त्यो खासै ठूलो समस्या नभएको बताएका छन्। ‘म तपाईंलाई भनिरहेको छु– पार्टीभित्रको समस्या कुनै ठूलो समस्या होइन, यसलाई हामीले स:माधान गर्न सक्छौं, गर्नुपर्छ। देशको आवश्यकता, जनताको आवश्यकता, भावनालाई हेर्नुपर्छ, त्यसलाई क:दर गर्नुपर्छ र हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। म कसैप्रति आ:रोप लगाइरहेको छैन। अस्ती पत्रकार सम्मेलन भयो, मैले कुनै ज:वाफ पनि दिइनँ।
तपाईं देखिरहनु भएको छ, अरू साथीहरू बोलिरहनुभएको छ। म चुप लागेर बसेको छु। मेरो सम्पूर्ण प्रयास पार्टी मिलाउने, ए:कताबद्ध राख्ने, फु:ट्न नदिने नै हुन्छ। कतिपय साथीहरू फु:टे फु:ट्छ, आदि/इत्यादि जस्ता अभिव्यक्ति पनि दिएर पत्रकार सम्मेलनमै जुनसुकै परिणामका लागि तयार होऊ भन्ने खाललै अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ।’, उनले भने, ‘मैले त्यसको कुनै ज:वाफ दिएको छैन। म के भन्न चाहन्छु भने पार्टी फु:ट्दैन। पार्टी फु:टाउन कसैले सक्दा पनि सक्दैन।’
असार १० बाट सुरु भएको स्थायी क:मिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा माग भएपछि विभाजनको डिलमा पुगेको स:त्तारुढ ने:कपाको वि:वाद मिलाउन दुई अध्यक्ष बिहिबार पुनःवार्तामा बसेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको बुधवाको अन्तर्वार्तालगत्तै दुई अध्यक्ष र सहयोगी नेताहरुसहितको वार्तामा समाधानका वि:कल्पमाथि छलफल सुरु भएको हो ।
नौ दिनपछि संवादमा जुटेका ओली र प्रचण्डसँगको छलफलमा महासचिव विष्णु पौडेलसहित स्थायी कमिटी सदस्यद्धय शंकर पोखरेल र जनार्दन शर्मासमेत सहभागी रहेकाले मध्यमार्गी निकास आउने अपेक्षा नेताहरुले गरेका छन् । यसबीचमा ओली र प्रचण्डबीच झलनाथ खनाल तथा सुवास नेम्वाङलाई समेत राखेर छलफल भएको थियो ।
ने:कपाका एक प्रभावशाली ने:ताका अनुसार अहिलेको केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा रुपान्तरण गरेर चैतमा महाधिवेशन गर्ने गरी स:माधान खोजिँदैछ । दुवै अध्यक्षलाई संयोजक बनाएर महाधिवेशन आयोजक समितिमा रुपान्तरण गर्ने वा एकजनालाई मात्र संयोजक बनाउने भन्नेमा बहस चलिरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार महाधिवेशन आयोजक समितिको संयोजकमा झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमको नाममा समेत छलफल भएको छ । महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गरेर अहिलेको संकट समाधान खोज्नेबारे छलफल शुरु भए पनि त्यसको ठोस प्रस्ताब बनि नसकेको बालुवाटार वार्तामा सहभागी एक नेताले बताए ।
प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षले ओलीलाई एक पद छाड्न दबाब दिइरहेको छ । उनीहरुले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदिए पार्टीको बहुमतले गरेको निर्णय मान्नुपर्ने द:बाब पनि दिइरहेका छन् । यही कारण प्रधानमन्त्री ओली बैठकमै जान छा:डेपछि ने:कपाको स्थायी कमिटी बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थ:गित छ ।
ने:कपाका मध्यमार्गी ने:ताहरुको पहलमा दुई अध्यक्षबीच समझदारीको प्रयास भइरहेको र पार्टीका अन्य ब:रिष्ठ ने:ताहरुलाई समेत सहमतिमा ल्याएर पार्टी एकता जोगाउने प:हल गरिएको त्यसमा सं:लग्न एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए ।
दुवै अध्यक्षबीच सं:वादका रहेका सं:सदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले पार्टीको अहिलेको ग:तिरोधको निकास दुई अध्यक्षले दिने भन्दै अब त्यसको निणर्ायक छलफल शुरु भएको बताए । उनले जे विषयमा सहमति हुने हो, दुई अध्यक्षले नै गर्ने भएकाले सबै विकल्पहरु अध्यक्षहरुलाई नै जि:म्मा दिइएको बताए ।
प्रचण्ड-माधव पक्षका नेताहरुचाहिँ अहिलेको ग:त्यावरोध प्रधानमन्त्री ओलीकै कारणले सिर्जना भएको बताउँदै निकासको प्रस्ताव पनि ओलीबाटै आउनुपर्ने बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्रीले दुबै पद नछाड्ने र महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएर जाऔं भन्ने प्रस्ताव ओली समूहले ल्याएको संस्थापन इत्तर पक्षका ने:ताहरुको भनाइ छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै अजको पाँच दिनमै ने:कपाको वि:वाद स:माधान होला त ? यसको ‘का:उन्ट डाउन’ आजैबाट सुरु भएको छ ।